2021 IWCA Fihaonambe isan-taona (20-23 Okt) - Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra iraisam-pirenena
Miara-misaraka indray: mamerina mandinika ireo vondrom-piarahamonina misy antsika amin'ny fampiharana
Mpikambana ao amin'ny Association Writing Center dia avy amin'ny firenena manerana ny kontinanta sy ny ranomasina, ary manome lanja an'io fahasamihafana io izahay ho iray amin'ny tanjaky ny fikambanana. Miara-miasa isika amin'ny zavatra zarainay ho toy ny vondrom-piarahamonina fanao eran-tany, izay nohazavain'i Etienne sy Beverly Wenger-Trayner (2015) ho toy ny vondrom-piarahamonina iray miaraka amina “mombamomba izay faritan'ny sehatra mahaliana iraisana. Ho anay, ny maha-mpikambana dia midika hoe "fanoloran-tena amin'ny sehatra, ary… fahaiza-manao iraisana izay mampiavaka ny mpikambana amin'ny olona hafa" (E. & B. Wenger-Trayner, 2015). Mandritra izany fotoana izany, amin'ny maha fikambanan'olon-tokana antsika, dia anisan'ny vondrom-piarahamonina marobe mifampitohy, mifamatotra ary, indraindray koa isika, mampivadi-po rehefa mifampiraharaha amin'ny soatoavina sy ny zavatra niainan'ny vondrom-piarahamonina iray izahay raha mifanerasera amin'ny iray hafa (Wengner- Trayner, 2015). Saingy, ny mampiavaka ny toerana misy antsika tsirairay avy no manome traikefa manan-karena hianarana sy hitomboana. Raha nisy izany, ny taon-dasa dia nanintona ny saintsika tsy ny zavatra zarainay ho anisan'ity vondrom-piarahamonina fampiharana eo amin'ny foibe fanoratana ity, fa koa ny fiantraikan'ny fomba fanao sy ny toerantsika amin'ny maha mpikambana antsika ao amin'ny vondrom-piarahamonina hafa fanazaran-tena. eo an-toerana amin'ireo vondrom-piarahamonina, tanàna ary firenena onenanay; ireo andrim-panjakana iasantsika; sy ny toe-piainana ara-tsosialy-tantara mifandraika amin'izany.
Ny fanadihadiana fohy momba ny famoahana ankehitriny sy ny kaonferansa ataon'ireo fikambanana mpiray tampo amintsika dia manondro ireo fanamby izay nifampidinihanay — mpitaiza, mpampianatra, mpianatra, mpitantana — tamin'ity taona lasa ity. Raha misy, ny areti-mandringana, dia nampitombo ny fahafantarana ny fanilikilihana manan-tantara sy mitohy ny fanafoanana ny fizotran'ny vondrona eo amin'ny fiarahamonintsika - ary ny fomba maro iainana ity herisetra / fahanginana ity amin'ny toerana samihafa. Tamin'ny fivoriana virtoaly tamin'ity taona ity tamin'ny volana Oktobra, izahay dia te-hanaiky ireo fanamby natrehin'ny vondrom-piarahamoninay manoratra - ny areti-mandringana manerantany; ny fanafihana mitohy amin'ny demaokrasia any Myanmar, Hong Kong, ary Etazonia; ny firongatry ny heloka bevava fankahalana sy ny korontana ara-poko; ny fahasimbana mitohy amin'ny planetantsika - ary diniho ny fomba nanamafisantsika ny talentantsika hamaly.
Nandritra ity taona lasa ity, nahita maso olona sy vondrona manerana ny maha mpikambana antsika isika - ivon-toerana misolo tena an'i Amerika atsimo sy avaratra, eoropa, atsinanana afovoany, afrika ary azia - mamaly ireo fanamby ireo amin'ny fomba tompon'andraikitra sy etika hanohanana rehetra mpanoratra izay mitsidika ny ivon-toeranay ary rehetra olona miasa ao aminy. Na dia maro amin'ireo ezaka ireo aza dia miorina amin'ny fomba fahalalana sy mifamatotra amin'ny vondron'orinasa fanaovana asa soratra eto aminay, izy ireo koa dia taratry ny fomba fijery tsy manam-paharoa azo avy amin'ny firaiketam-po mifanindry amin'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana fanao, zava-misy izay mampanankarena sy manasarotra ny asantsika amin'ny fomba tsy ampoizina. Ity asa ity dia mitaky ny hanamafisanay sy hamerenanay ny soatoavinay, mba hitrangantsika amin'ny toerana tsy mahazo aina indraindray eo anelanelan'ny milaza hoe iza isika ary manao hoe iza isika, ary hamerina hijery ny fanaonay mba hamaritana ny fomba sy ny valiny amin'ny toe-javatra misy ankehitriny.
Raha maro taminay no nandany ny taona lasa ara-batana ankoatry ny fianakaviantsika, ny mpiara-miasa amintsika ary ny vondrom-piarahamoninay, dia namory koa izahay. Ny fanavaozana sy ny hakingan-tsaina dia nitazona rehefa nahita fomba hafa hiarahana izahay. Hitanay ny ezaka hamaliana ity fotoana kairotic ity amin'ny famoahana, ny antso amin'ny kaonferansa, ny fanambarana ny toerana, ny làlan'ny fikarohana ary ny fiaraha-miasa izay miforona. Ary ny tantaran'ny fanambinay sy ny valinteninay, ny fikarohana sy ny fandraisana andraikitra ataonay - ny fotoana niakaranay niatrika famoizam-po mafy - no tianay hankalazaina amin'ity fihaonambe ity. Rehefa miaraka isika, na dia mbola misaraka ara-batana aza, dia mikatsaka ny hanaiky, hitrandraka ary hankalaza ny fomba hanohizantsika hamerina ny tenantsika ho toy ny vondrom-piarahamonina mavitrika, manavao, misaintsaina ary manara-penitra.
Ireo tolo-kevitra dia mety ho ara-tsindrimandry avy amin'ny (fa tsy ferana amin'ny) ireto kofehy manaraka ireto:
Inona ireo fanamby natrehin'ity ivon-toerana ity tamin'ny taon-dasa ary inona no navalinao? Avy amin'ireo vondrom-piarahamonina fanazaran-tena iza no nanintonana anao hamantatra ireo olana sy fomba hamaliana izany?
Inona no fiantraikan'ny zava-nitranga tamin'ny taona lasa teo amin'ny maha-mpitsabo foibe fanoratana anao? Inona no fiantraikan'izy ireo tamin'ny famantarana ny ivon-toerana misy anao?
Ahoana no ifampiraharahan'ny ivon-toeranao ny olana ara-pitsarana / fampidirana ara-tsosialy? Inona no fiantraikan'ny toe-java-misy tamin'ny taona lasa teo amin'ity asa ity? Mifototra amin'ny hetsika eo an-toerana na manerantany ve io asa io?
Inona avy ireo fanandramana eo an-toerana izay manahirana ny fanamby manerantany amin'ny asan'ny foibem-panoratanao? Moa ve nanampy ny loharanon-karena eo an-toerana amin'ny famaliana ireo fanamby ireo, sa nanohana anao ny vondrom-piarahamonina iray manerantany?
Tamin'ny fomba ahoana no nisy fiantraikany tamin'ny fifindra-monina tamin'ny fomba ahoana no ahatongavana sy hifampiraharaha amin'ireo vondrom-piarahamonina misy eo an-toerana sy manerantany?
Inona avy ireo soatoavina sy / na foto-kevitra fototra fanoratana fototra ao am-pon'ny fampiharana anao? Ahoana no fomba nampifanarahanao azy ireo hamaly tsara / amin'ny sahan-kevitrao?
Inona no fomba fijery, raha misy, ny elanelam-pifaneraserana omena amin'ny hevitra momba ny fomba fanao tsara indrindra, ny fampiofanana ho an'ny mpiasa, ny fahafaha-manao fikarohana, na ny fiaraha-miasa amin'ny faritra rehetra?
Ahoana ny fomba nitaizanao na nitazona ny fifandraisanao tamin'ny mpiasao, mpampianatra ary mpianatrao? Amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny asa an-tserasera mahatonga ireo fifandraisana ireo ho mora azo kokoa ho an'ny sasany izay voaroaka?
Ahoana no fomba nahaizanao nampifanaraka ny fomba fanombanana mba hisolo tena ny asanao rehefa nifindra tamin'ny Internet ianao?
Inona avy ireo lalam-pikarohana vaovao nipoitra avy amin'ny fiovan'ny toetran'ny toeram-piasantsika tamin'ity taona lasa ity?
Rehefa maminavina ny fiverenana amin'ny "ara-dalàna" isika, inona ireo fomba fanao vaovao tianao tazonina ary fanao inona no tianao hajanona?
Ny Fihaonambe IWCA 2021 dia hatao an-tserasera mandritra ny herinandron'ny 18 Oktobra ary hanasongadina endrika endrika fampisehoana isan-karazany. Ireo mpandray anjara dia afaka manolotra ny iray amin'ireto karazana fampisehoana ireto:
Fampisehoana tontonana: fampisehoana 3 ka hatramin'ny 4 isaky ny 15-20 minitra amin'ny lohahevitra na fanontaniana manokana.
Fampisehoana ho an'ny isam-batan'olona: famelabelarana 15-20 minitra (izay hatambatra amin'ny tontonana ataon'ny seza fandaharana).
Atrikasa: fotoam-pandraisana anjara izay mampiditra ny mpanatrika amin'ny fianarana mavitrika.
Resadresaka an-databatra boribory: 15 minitra famolavolana fanoloran-kevitra ataon'ny mpitarika, arahin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mpanatrika.
Vondron'olona mahaliana manokana: Resadresaka stratejika tarihan'ny mpiara-miasa izay manana fahalianana mitovy amin'izany, toerana misy ny andrim-panjakana na ny mombamomba anao.
Ignite Presentation: fampisehoana 5 minitra ahitana sary 20 isaky ny maharitra 15 segondra
Fampisehoana afisy: fampisehoana fomba-fikarohana-fomba izay hamoronan'ny mpanolotra afisy hamolavola ny fifanakalozan-kevitr'izy ireo amin'ireo mpanatrika.
Works-in-Progress: fifanakalozan-kevitra amin'ny latabatra izay iarahan'ny mpanolotra fandaharana fohy (5-10 minitra) miresaka momba ny iray amin'ireo tetik'asa fikarohana foibem-panoratan'izy ireo (eo an-dàlana) ary avy eo mahazo valiny.
Na dia mbola hampidirina aza ny fampisehoana tontonana sy isam-batan'olona, ​​amin'ity taona ity, ireo karazana fotoam-pivoriana isan-karazany dia hisolo tena azy ireo ihany. Ireo tolokevitra dia atomboka amin'ny 4 Jona 2021 amin'ny 11:59 alina HST (maro ny olona no hanana fotoana bebe kokoa, raha tsy any Hawaii ianao! :)
Mandehana any amin'ny tranokala IWCA (www.writingcenters.org) raha mila vaovao momba ny fihaonambe sy amin'ny vavahadin'ireo mpikambana (https://www.iwcamembers.org) hiditra ary handefasana tolo-kevitra. Mifandraisa amin'ny Dr. Georganne Nordstrom (georgann@hawaii.edu) raha mila fampahalalana fanampiny.
Wenger-Trayner, E. & B. (2015). Fampidirana ireo vondrom-piarahamonina misy fampiharana: Topimaso fohy momba ny foto-kevitra sy ny fampiasana azy. Wenger-Trayner.com.
Ho an'ny kinova fanaovana pirinty, kitiho ny CFP 2021: Miaraka indray.